အဝါရောင်: October 2009
ဓမ္မစေတီ၏ ဟောကြားချက်သည် ဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပာယ်မှစ၍ မှားပါသည်။
တဏှာကို အရင်ဆုံးသတ်တဲ့နည်း-ဟူ၍ မရှိနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒိဋ္ဌိကို အရင်ဆုံးသတ်တဲ့နည်း-ဟူ၍ မရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
''တဏှာအရင်ဆုံးသတ်နည်းသည် ကောင်းသာကောင်း၏။ မမှန်ပါ။ ဒိဋ္ဌိကို အရင်ဆုံးပယ်သတ်နည်းသည် ကောင်းလည်းကောင်း၏။ မှန်လည်းမှန်၏'' ဟူသောဟောချက်သည် ရှင်းစရာမလိုပါ။
၂- ဘာသာရေးစာပေကြီးတစ်ခုလုံးမှားယွင်းသွားပြီမို့ နိဗ္ဗာန်နှင့်လွဲကြပြီ၂
အခု ... (ပ) ... အများကြီးမသိနဲ့အုံး ။ (မြတ်စွာဘုရားရှင်သိအပ်သောတရား။ ဗွီစီဒီခွေ။)
စိစစ်ချက်။ ။ဤဆောင်းပါးသည် အမှတ် (၂)ဖြစ်၍ (၂)သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဖြင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ၊ ဘုရားဖြစ်ဟူသော ဟောပြောချက် မှန်-မမှန် စိစစ်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ဆောင်းပါးစဉ် အမှတ် (၁) အရာမှာ စိစစ်ပြဖွယ်များစွာ ကျန်ရှိကြပါသေးသည်။ ယင်းကျန်ရှိနေရာတို့ကို ဆက်လက် စိစစ်ပြရပါဦးမည်။
(၁) ''အနေကဇာတိသံသာရံ (ပ) ခယမဇ္ဈဂါ။ (ပ) ဟောဒီ ပဉ္စက္ခန္ဓာ၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတွေကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆောက်တဲ့ တဏှာယောက်ျား လက်သမားကိုမတွေ့လို့ ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလ္လင်ကို မရမချင်း၊ အဒီရွှေပလ္လင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို မမြင်မချင်း၊ ဒုက္ခတွေ ထပ်ကာထပ်ကာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (ပ) ဒါဖြင့်ရင် ဒီဂါထာကြီး ရွတ်နိုင်ရအောင် ဘယ်တရားကို သိသလဲ။ (၎င်းစာ၊ နှာ၊ ၁။)
စိစစ်ချက်။ ။အထက်ပါတို့တွင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေဟူ၍ ပါရှိရာ'' အကြောင်း တရားတွေကို ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟု ဆို၏''ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါသည်။ ဤဥဒါန်းဂါထာအရာတွင် 'ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတို့သည် တဏှာတရားကြောင့် ဖြစ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတို့သည် အကျိုးတရား စစ်စစ်ကြီးသာဖြစ်ကြောင်း ထင်းလှပါသည်။ အကြောင်းတရားတွေကို ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟု မဆိုရ။ ဆိုလျှင် မှားပါသည်။
(၂) ''ဒီမှာကျမ်းညှိဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဤဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာ၌ အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို နိဗ္ဗတ္တေတွာ= ဖြစ်စေ၍-လို့။ ဒီလို ရှိပါတယ်။ နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ် အဋ္ဌကထာမှာတော့ အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်မှ ဝုဋ္ဌာယ= ထ၍-လို့ ။ အဲဒီလို ရှိပါတယ်။ ပါဠိနှစ်ရပ် ဖြစ်သွားပြီ။ ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာက အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေပြီး (ပ) ပစ္စယာကာရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (ပ) အဲဒီဈာန်ကို အခြေခံထား၍ ပစ္စယာကာရလို့ခေါ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္န (ကြောင်းကျိုးနှစ်ဖြာ) ဝိပဿနာကို ပွားစေပြီး၍ (ပ) နိဒါနသံ-ဋ္ဌကတော့ အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကထပြီးတော့မှ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (၎င်းစာ၊ နှာ - ၂၊ ၃၊ ၄၊၅။)
စိစစ်ချက်။ ။အထက်ပါတို့တွင် ဖြစ်စေ၍နှင့် ထ၍ကို အထူးပြု၍ ဟောပြထားပါသည်။ ဖြစ်စေဖြင့် ဈာန်ကို ဝင်စားမှု ပြုနေသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ထ-ဖြင့် ဈာန်ဝင်စားမှုကို ဆက်မပြုတော့ဘဲ ရပ်နားထားလိုက်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ မထူးပါ။ မထူးကြောင်းမှာ ဈာန်ဝင်စားမှုကို စတင် ပြုလုပ်ထားလျှင် ရပ်နားမှုကို ပြုရဦးမည်သာတည်း။
ထို့ပြင် - ဗုဒ္ဓဝင်ဋ္ဌ-၌ (၁) ပစ္စယာကာရ (၂) အာနာပါနဟုရှိ၍ သံယုတ်ဋ္ဌ-၌ (၁) အာနာပါန (၂) ပစ္စယာကာရဟုရှိသည်နှင့် စပ်၍လည်း''ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာက အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေပြီး (ပ) ပစ္စယာကာရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ ဆိုပါတယ်''ဟူ၍ ရောယှက်ရှုတ်ထွေးလျက် ရှိပါသည်။ ကျမ်းစာကို သေချာ မသိမြင်ဘဲ မရရှိဘဲ စာမျက်နှာကို ကြည့်လှန်ပြီး ဟောပြောရသဖြင့် ဗျာများနေခြင်းကြောင့် ရှင်းလေမှားလေး ဖြစ်ရဟန် တူပါသည်။ ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာက အာနာပါနစတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေပြီးမှ ပစ္စယာကာရကို ပြဆိုသည် မဟုတ်သောကြောင့် ကူးယူဖော်ပြပါ ''ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာက အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေပြီး (ပ) ပစ္စယာကာရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ ဆိုပါတယ်'' ဟောပြောချက်သည် လုံးဝမှား၏။
ဆောင်းပါးစဉ် အမှတ် (၁)၌ 'ပစ္စယာကာရေ ဉာဏံ သြတာရေတွာ အာနာပါန စတုတ္ထဇ္ဈာနံ နိဗ္ဗတ္ထေတွာ' ဟူ၍ ဗုဒ္ဓဝင်မူရင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။ တိုက်ဆိုင်-စိစစ် ကြည့်ပါ။
တစ်ဖန် ''ဝိပဿနံ= ပစ္စယာကာရလို့ခေါ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကြောင်းကျိုး နှစ်ဖြာ ဝိပဿနာကို'' ဟု ဆိုရာမှာလည်း အလွန်မှပင် မှားလွန်းလှပါသည်။ မှန်၏။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သည် အကြောင်းတရားဖြစ်သော်လည်း ဝိပဿနာ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်= အကြောင်းတရားကို သိသောဉာဏ်သည် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်မျှသာ ရှိပါသေးသည်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နသည် အကျိုးတရားဖြစ်သော်လည်း ဝိပဿနာ မဟုတ်ပါ။ မှန်လှ၏။
ပဋိစ္စသမုပ္ပန္န=အကျိုးတရားကိုသိသောဉာဏ်သည် နာမရူပ-ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မျှသာ ရှိပါသေးသည်။ ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုသည်မှာ အကျိုးတရားတို့ကို သိမြင်ပြီး၍ ထိုအကျိုးတရားတို့၏ လက္ခဏာသုံးပါး၊ အကြောင်းတရားတို့ကို သိမြင်ပြီး၍ ထိုအကြောင်းတရားတို့၏ လက္ခဏာသုံးပါးတို့ကို ထိုးထွင်း၍ သိမြင်သော ဉာဏ် ဖြစ်ပါသည်။ ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ကို ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဓိဟုဆိုရာတွင်'' လက္ခဏာသုံးပါးကို သိခြင်းကြောင့် ဉာဏ် မည်၏။ လက္ခဏာသုံးပါးတို့ကို မြင်ခြင်းကြောင့် ဒဿန မည်၏'' ဆိုတာကို ပထမလတ်တန်းဝင် စာသင်သားကလေးများကပင် သိနိုင်ကြပါသည်။
တစ်ဖန်တုံလည်း ... ပစ္စယာကာရလို့ခေါ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟူ၍ ဟောထားရာ ''ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပစ္စယာ ကာရဟု ခေါ်သည်''ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါသည်။ ယင်းအဓိပ္ပါယ်အရဖြစ်သော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အရမှာ အကြောင်းတရားတွေကိုလည်း မယူရ။ အကြောင်းတရားတို့သည် ပစ္စယ(=အကျိုးတရားဖြစ်လာအောင် ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရား)တို့သာ ဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းတရားတို့သည် (ပစ္စယ+အာကာရတို့တွင်) အာကာရ= ကျေးဇူးပြုပုံ အခြင်းအရာများ မဟုတ်ကြပေ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အရမှာ အကျိုးတရားတွေကိုလည်း မယူရ။ အကျိုးတရားတို့သည် ပစ္စယုပ္ပန္န=ပဋိစ္စသမုပ္ပန္န (=အကြောင်းတရားကြောင့် ဖြစ်လာကြသောတရား) တို့သာ ဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စယာကာရဆိုသည်မှာ ပစ္စယ= ကျေးဇူးပြုတတ်နှင့်သောအကြောင်း တရားတို့၏ (အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင်) အာကာရ=ကျေးဇူးပြုပုံအခြင်းအရာ အကြောင်းနှင့်အကျိုး ဆက်စပ်မှုရှိနေပုံ အခြင်းအရာတို့သာဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုသည်မှာ အခြင်းအရာတို့သာတည်း။
သို့ဖြစ်၍ ပစ္စယာကာရ=ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ဝိပဿနာ အတူတူ မဟုတ်ကြောင်း(ဝါ) ဝိပဿနံ= ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္န ကြောင်းကျိုးနှစ်ဖြာကို - ဟူ၍ အနက်မြန်မာ မပြန်ရကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာက ''ပစ္စယာကာရေ ဉာဏံ သြတာရေတွာ (ပ) ဝိပဿနံ ဝဍ္ဎေတွာ''ဟူ၍ ခွဲခြားပြသထားပြီး ရှိနေပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့က မျက်လှည့်ဆရာကိုပင် ယုံတတ်ကြလေတော့ အထင်ကြီးအောင် 'လုပ်ယူ' တတ်သူများ၊ ယုံလောက်အောင် လုပ်ယူတတ်သူများကို ယုံမိ၍ မှားကြရှာပါပေသည်။ (ဤစကား၌ လုပ်ယူကို လူယုတ်ဟု မပြန်ရ။ အချို့ဆရာတော်ကြီးများက လုပ်ယူဟုတွေ့လျှင် လူယုတ်ဟု ပြန်ဆိုတတ်ကြပါသည်။)
အထင်ကြီးအောင် ယုံလောက်အောင် လုပ်ထားပုံများစွာတို့ထဲက ထုတ်ပြရလျှင် (၃) ''တစ်ခါက ပြောဖူးပါတယ်။ ပထမလတ်တန်းမှာ ဉာဏ်သုံးပါးကို ယာမ်သုံးပါးနဲ့ ယှဉ်ခဲ့ပါ ဆိုတာ။ ဆရာတော်တို့ မဖြေနိုင်တာပါ။ သီချင်းကလေး တစ်ပုဒ်က ပုဗ္ဗေနိဝါသခေါ် ဉာဏ်တော်တစ်ပါးကိုလ ညဉ့်ဦးယာမ် ချိန်ခါ ... အဲဒီသီချင်းနဲ့ ပထမလတ်တန်းမှာ အမှတ်ပြည့် ရခဲ့ပါတယ်။ (၎င်းစာ ။ နှာ -၂။)
စိစစ်ချက်။ ။ဤစကားရပ် ပထမလပ်တန်းမှာ အမှတ်ပြည့်ရရှိခဲ့လျှင် တစ်ပြည်လုံး ပထမလတ်တန်း ပထမဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။ ဉာဏ်တော်သုံးနှင့် ယာမ်သုံးမေးခွန်းတစ်ပုဒ်မျှမှာ အမှတ်ပြည့် ရရှိလျှင် ကျန်နှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်ရမှတ်နှင့်ပေါင်း၍ ရိုးရိုးအောင်မှတ်မျှသာ ရနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော စကားရပ်များကို ကြားနာရသောအခါတွင် ဝေဖန်တတ်ဖို့ လိုပါသည်။ ခွဲခြား၍ ပိုင်းဖြတ်တတ်ဖို့ လိုပါသည်။ အသိမှန် အမြင်မှန် ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်လှပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ရောထွေးလျက် အထင်ကြီးမိပြီး မကြည်ညိုထိုက်သောအရာ၌ ကြည်ညိုမိသော ''ပညာပေတုံး သဒ္ဓါငုံး လုံးဝအမြီးမထွက်'' ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဆောင်းပါးစဉ် အမှတ်(၁)ထဲတွင်လည်း ဤကဲ့သို့သောစကားများကို (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို့ဖြင့် အမှတ်ပြ၍ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်ထားကြသည့် ဆရာတော်များကိုပင် ဦးနှောက်ဖြုန်းတီးနေသူများဟု ပျက်ရယ်ပြုချက်များ ပါရှိကြသည်။ ၎င်း (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို့ကို အထက်ပါဝေဖန်နည်းဖြင့် ပြန်၍ ဝေဖန်ကြည့်ရန် ပြန်၍ ဖတ်ရှုပါကုန်။
(၄) ''ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို သိ၍ ဘုရားဖြစ်တာကို ထောက်ရင် အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်က ရှေ့က ရှိသင့်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာမှာတော့ နောက်က ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေသိ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ခဲ့တဲ့ ပါဠိစာပေတွေ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ- သင်္ဂါယနာတင်ထေရ်ရှင်အပေါင်းတွေကို ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် ဘယ်ပါဠိက ဘယ်လို ရှိသင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်အရွယ်ကလေးနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ သို့သော် (ပ) ပညာရှိတို့ထံမှာ အဆုံးအဖြတ် ယူတော်မူကြပါကုန်။ (၎င်းစာ၊ နှာ - ၅။)
စိစစ်ချက။် ။ အထက်ပါတို့တွင် စိစစ်ဖွယ်မှာ အာနာပါနစတုတ္ထဈာန်သည် ''သမထဘာဝနာ= အပ္ပနာတရား ဖြစ်သည်။ ၎င်းက ဝိပဿနာ၏အခြေခံ (ဝိပဿနာပါဒက) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
''ပစ္စယာကာရ=ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သည် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်= ပရိယတ္တိသုတ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကလည်း ဝိပဿနာ၏ ရှေ့ဦးတရား (ဝိပဿနာပုဗ္ဗက) ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားလောင်းလျာ သယမ္ဘူတာ ဝိပဿနာရှင်တို့မှာမူ စိန္တာမယဟုသာ သုံးရသည်။ (ပရိယတ္တိသုတဟု မသုံးရ)။ ဝိပဿနာပါဒက=အခြေခံနှင့် ဝိပဿနာပုဗ္ဗက= ရှေ့ဦးတရားတို့သည် သူ့ပမာဏနှင့်သူ မပါလျှင်မပြီး အရေးကြီးကြသည်သာ ဖြစ်ပါသော်လည်း ''ပစ္စယာကာရ= ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ ဉာဏ်သက်ဝင်စေပြီးမှ အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေလျှင်လည်း ရသည်။
''အာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ကို ဖြစ်စေပြီးမှ ပစ္စယာကာရ= ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ ဉာဏ်သက်ဝင်စေလျှင်လည်း ရသည်။
ဘယ်ဟာ ရှေ့ကျက် ဟူ၍ မဆိုသာ
ဘယ်ဟာ နောက်ကျက် ဟူ၍ မဆိုသာ။
ခုပင်ဖြေရန်၊ ဘာသာမှန်၊ ကျက်ရန်တွင်တွင်သာ။
ထိုနည်း မြော်မြင်၊ 'အာ-ပ' တွင်လည်း၊
အာလျှင် ရှေ့က၊ ပ-နောက်က-ဟု
မုချမလို၊ ဝိပဿ်ကြို၊ လိုကွက် မရှိ ပြည့်ဖို့သာ။
လေးဖြာမဂ်ဆိုက်၊ ဖိုလ်ဝင်လှိုက်၊ ဖြစ်ထိုက် သဗ္ဗညုတာ။
စိစစ်ဖော်ပြ၊ အဓမ္မ၊ မှတ်ကြ 'မှား' ဟုသာ။
မှာထားချက်။ ။အထက်ပါ အာနာပါနစတုတ္ထဈာန်နှင့် ပစ္စယာကာရ နှစ်ပါးတို့တွင် အဘယ်တရားက ရှေ့မှာရှိသင့်ကြောင်း၊ အဘယ်တရားက နောက်မှာရှိသင့်ကြောင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောပြောသူက ''ပညာရှိတို့ထံမှာ အဆုံးအဖြတ် ယူတော်မူကြပါကုန်'' ဟူ၍ ဆိုထားပါသည်။ ဤဝေဖန်စာရေးသူသည် ပညာရှိမဟုတ်ပါကြောင်း'' ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွာ့'' ဟူသည်နှင့်အညီ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
ဤဆောင်းပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင်နှင့် ကာယကံရှင်၏တရားအတိုင်း ယုံကြည်သူတို့က တရားနည်းလမ်းအလျှောက် ပြန်လည်ရှင်းလင်း၍ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးကြပါရန် ပန်ကြားလိုက်ပါသည်။ ဝေဖန်ရေးစာပေ၏ သဘောတရားမှာ ဝေဖန်ခံရသည့်ဘက်က လှည့်ကြည့်လာအောင် ရေးတတ်ရခြင်းဟူ၍ ပါရှိသည့်အတွက် ကာယကံရှင်ကသော် လည်းကောင်း စာဖတ်ပရိသတ်တို့ကသော် လည်းကောင်း ဂရုစိုက်မိလှည့်ကြည့်စရာ ဖြစ်လောက်အောင် ရေးသားတင်ပြပါသည်။
အ၀ါရောင် ဘလော့ စီဘောက်မှ စာများ
17 Oct 09, 07:56
သစ္စာရှင်: အသိပညာအသင့်အတင့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည် လူ့လောက၊ လူ့ဘ၀ကို ယထာဘူတာကျကျ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါက ဒုက္ခသစ္စာကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်လာမည် အမှန်ဖြစ်ဖြစ်၏ ။
17 Oct 09, 07:23
သစ္စာရှင်: *ဓမ္မစကြာသုတ်၌ အိုမှု၊နာမှု၊သေမှုလောက် လူတို့ဂရုမပြုမိသော ဒုက္ခနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထား၏
သစ္စာရှင်: ‘‘အကြင်သူသည်သဒ္ဒါစိတ်ဖြင့်ဘုရား၊တရား၊သံဃာကိုဆည်းကပ်ကိုးကွယ်၍သီလစောင့် ထိန်းကာမေတ္တာပွားများစေကာမူထိုသူသည်အနိစ္စတရားကိုခေတ္တခဏမျှသိမြင်နားလည်လျှင်လည်းပိုမိုအကျိုးရှိမည်ဖြစ်၏။’’ (အဂုင်္တ္တရနိကာယ်)။
17 Oct 09, 04:31
သစ္စာရှင်: ငါရှုးနေတာကြာပြီဟ.နင်တိုခုမှသိကြ တာလား.ပြောကြပါဆိုကြပါ.ငါကတော့.မင်းတို့ထင်နေသလိုမဟုတ် ငါဘုရားမှတပါးဘယ်သူမှမထောက် ခံဘူးကွ.အဖွဲစည်းဆိုရင်.ပိုတောင်မုန်း သေးဗျာ...
tee: သစ္စာရှင်ဆိုတာက ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အကြံနဲ့ လာလုပ်နေတာပဲ။ ဘာမှ ဆက်မပြောရဲ ဘယ်သူမှ လာမထောက်ခံရဲအောင်
17 Oct 09, 03:15
သစ္စာရှင်: ‘‘အာနန္ဒာ၊အကြင်ကြောင့်ငါဟူသောအတ္တသဘောမှလည်းကောင်း၊ငါ၏ဥစ္စာတည်းဟူသောအတ္တနိယသဘောမှလည်းကောင်း ဆိတ်သုဉ်း၏။ ထို့ကြောင့် လောကသည် သုညတည်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏ ’’ (သဠာယတနသံယုတ်၊သုညလောကသုတ်) ။
17 Oct 09, 03:08
သစ္စာရှင်: ကောင်လိုက်တာဗျာ.ဒီဆိုက်ကတော့ ငြိမ်နေတာဘဲ..သာဓု...၃
16 Oct 09, 21:09
သစ္စာရှင်: - ဧဟိပသိက = သူတစ်ပါးကို ပြောပြထိုက်သောတရားဖြစ်ရမယ်။ - သြပနေယျိက = ကိုယ်နှင့် မကွာ တစ်ပါတည်း အချိန်တိုင်းမှာ ဆောင်ထားလို့့ ရရမယ်။
16 Oct 09, 21:08
သစ္စာရှင်: - ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗ ၀ိညူဟိ = သာမန်အသိရှိသူတို့ ပင် မျက်မှောက် လက်ငင်း အကျိုး ခံစားနိုင်သော တရားဖြစ်ရမယ်
16 Oct 09, 21:07
သစ္စာရှင်: - သန္ဒိဋ္ဌိက = မိမိကိုယ်တိုင် ကြောင်ကျိုးဆက်စပ်ပြီးသိမြင်နိုင်သော တရားဖြစ်ရမယ်။ - အကာလိက = ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ ဘယ် ပုဂ္ဂိလ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ကျင့်သုံးလို့ရသောတရားဖြစ်ရမယ်။
16 Oct 09, 21:06
သစ္စာရှင်: - သွာက္ခာတ = ဟောသူ၊ နာသူ ဘယ်သူမှမနစ်နာတဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံးမှာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချလို့ မရအာင်ကောင်းတဲ့ တရားဖြစ်ရမယ်။
16 Oct 09, 21:03
သစ္စာရှင်: ဒီနေ့သာဝကနှစ်ယောက်တိုးနေတော ဟောကြားရမှာပေါ
သစ္စာရှင်: ၁၁။ ‘‘အတိတ်ကာလက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော တရားစုသည် ချုပ်ပျောက်ကြလေးပြီ ။အနာဂတ်တရားစုသည်လည်း မရောက်လာသေးချေ ။ သို့ဖြစ်၍အတိတ်ကိုအောက်မေ့စွဲလန်းခြင်း၊အနာဂတ်ကိုတောင့်တစွဲလမ်းခြင်းမပြုရာ ။’’(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ်
16 Oct 09, 12:40
ကုသလ: ကျမ်းကိုးပြ၍ လှည့်စာခြင်းတဲ့ လူတွေခံနေရတာလေးပါ16 Oct 09, 11:12
အလှတရား: အဂုင်္တ္ထိုရ်မှာပြတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြန်လေးဖြစ်ဖြစ် ပါဠိတော်လေးဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ပြတော် မူပါဘုရာ့
16 Oct 09, 09:14
သစ္စာရှင်: အဲ့ဒီ ကိုယ်တိုင်သိနဲ့လောကအမှန် ကို မလွန်တဲ့ တရားဟာ သမ္မာ ( အမှန် ) အဲ့ဒီ လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်မှ ဓမ္မ ( လူဆောင်ထိုက်တဲ့ တရား ) ဖြစ်ပါတယ်လို့အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မှာ ဗုဒ္ဓမိန့် ကြားချက်ရှိပါတယ်။
16 Oct 09, 09:13
သစ္စာရှင်: - အကောင်းလဲဖြစ်ရမယ် - အပြစ်လည်းကင်းရမယ် - ချီးမွမ်းဖွယ်လည်းဖြစ်ရမယ် - လက်တွေ့ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းထဲမှာ ထည့်သုံးကြည့်ရင် အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ရမယ်လို ဆိုတာပါပဲ။
သစ္စာရှင်: အဲ့ဒီ ကိုယ်တိုင်သိနဲ့လောကအမှန် ကို မလွန်တဲ့ တရားဟာ သမ္မာ ( အမှန် ) တရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အမှန်တရားဟာ
16 Oct 09, 09:12
သစ္စာရှင်: ဘုရားက အမှန်တရားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိနဲ့လောကအမှန် ဤနှစ်တန်ကို မလွန်ပဲ ရှိရမယ် လို့သံယုတ် ပါဠိတော်မှာ မိန့် ကြားထားချက်ရှိပါတယ်။
16 Oct 09, 09:10
သစ္စာရှင်: ငဇော်အောင်ငါရဲ့တရားကိုမှတ်သား မှုမရှိဘူးနဲတူတယ်.အိပ်တောအိပ်တောမိုးလင်းမှဆက် ဟောမယ်..မင်းမကျွတ်နိုင်သေးဘဲကိုး ငါမင်းကျွတ်ြ့ပီထင်နေတာ ငါဆက်လက်ဟောကြားရအုန်းမယ်
16 Oct 09, 09:06
သစ္စာရှင်: ကဲ...ငယ်ကျွန်ြ့ကီး.ငအောင်မြင့် ငဇော်အောင်.ငယ်ကျွန်မ.မယ်မြင့်တို့ ငါကိုယ်တော်မြတ်..ကျိမ်းစက်တော်ခေါ်တော် မူမယ်.မမိုက်ကြနဲ.ငါတရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြ။
16 Oct 09, 08:52
zaw aung: ကဲ အရူး ဒီလောက်ရူးရတော်ရောပေါ့ကွာ စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထား ဆေးလှုပ်သောက်
16 Oct 09, 08:37
သစ္စာရှင်: ငါသည်.ဒီနေ့မှစ၍.သစ္စာတရား. အမည်မှသစ္စာတရားရဲပိုင်ရှင် သစ္စာရှင်ဟုအမည်ပြောင်းလွှဲ လိုက်သည်.(ငယ်ကျွန်ြ့ကီး.ငအောင်မြင့် ငဇော်အောင်.ငယ်ကျွန်မ.မယ်မြင့် ) တို့အားလုံးမှတ်ထားကြ
16 Oct 09, 07:31
သစ္စာတရား: ဘဝဆိုတာနေလိုလဲထွန်းတောက်တယ် ပန်းလိုလဲချောက်သွေ့တယ် နေလိုထွန်းတောက်ချိန်မှာမမြှောက်နဲ ပန်းလိုခြောက်သွေ့ချိန်မှာမကြောက်နဲ
16 Oct 09, 07:19
သစ္စာတရား: *ဒုက္ခတရားကိုဟောသော ဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌ အိုမှု၊နာမှု၊သေမှုကိုရှေ့ တန်းသို့ တင်ထားခြင်းမှာ လောက၌ အလွန်းထင်ရှား၍ လူတိုင်းတွေ့ ကြုံရသောကြောင့် လူအများနားလည်ရန်ပြဆိုထားခြင်းဖြစ်၏ ။
သစ္စာတရား: သတ္တိနှင့် မျှော်လင့်ချက်များကို မျှဝေ၍ ကြောက်ရွံ့ မှု စိတ်နှလုံး ထိခိုက်နာကျင်မှု စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတို့ကို ပယ်ဖျက်မည် ။
16 Oct 09, 06:58
သစ္စာတရား: သဘောတရားတို့သည်သာလျှင် ရှိကုန်သည်ဟုထိုရဟန်းအား သတိသည် ရှေးရှုထင်တတ်၏။ထိုရဟန်းသည်လောက၌ တစ်စုံတစ်ရာမျှကို ငါ၊ငါ၏ဥစ္စာဟူ၍ မစွဲလမ်းချေ။’’ (ဒီဃနီကာယ်၊မဟာသတိပဌာန်သုတ်)
သစ္စာတရား: ‘‘ရဟန်းသည်၊သဘောတရားတို့၌ဖြစ်ကြောင်း၊ပျက်ကြောင်းတရားနှင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကိုအကြိမ်ကြိမ်ရှုလေ့ရှိ၏။
သစ္စာတရား: ‘‘အာနန္ဒာ၊အကြင်ကြောင့်ငါဟူသောအတ္တသဘောမှလည်းကောင်း၊ငါ၏ဥစ္စာတည်းဟူသောအတ္တနိယသဘောမှလည်းကောင်း ဆိတ်သုဉ်း၏။ ထို့ကြောင့် လောကသည် သုညတည်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏ ’’
16 Oct 09, 06:53
သစ္စာတရား: ဟေး.မြင့်..နင်ဘာနားလည်လို့လဲ ငါကထင်ရာတွေရေးနေတာမဟုတ်ဘူး ဘုရားပါးစပ်ကထွတ်လာတဲ့တရားတွေဟ နင်ဟာ.ဝါဒစွဲတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာထင်ပေါ်
16 Oct 09, 06:48
သစ္စာတရား: မြင့်ဆိုတဲကောင်မကငါလိမ္မာတော မိုက်အောင်ဖျက်ဆီနေပါလား ဟေ့သာသနာဖျက်မသွားဒီမှာမလာနဲ နင်လင်ဆီနင်သွား
16 Oct 09, 06:44
သစ္စာတရား: ကောင်းမှုမကောင်းမှု၏အကျိုးကိုခံစားရ၏။အခါခပ်သိမ်းရှိ၏။ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိ။မြေကြီးမြင့်မိုရ်တောင်လနေတို့ကဲ့သို့အမြဲတည်သည်ဟူသော အယူသည်ဖြစ်၏ ။’’
သစ္စာတရား: ‘‘မသင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသောသူအား ငါ၏ကိုယ်သည်ပြောဆိုစီရင်တတ်၏ ။ သိတတ်၊ခံစားတတ်၏ ။
16 Oct 09, 06:27
သစ္စာတရား: ‘‘စောင်းကိုအစိတ်တစ်ရာခွဲ၍အစိတ်စိတ်အတုံးတုံးပြုသော်လည်းစောင့်သံကိုရှာ၍မရသကဲ့သုိ့ရဟန်းသည်ခန္ဓာငါးပါး၌ငါဟူ၍ လည်းကောင်း၊ငါ၏ဥစ္စာဟူ၍လည်းကောင်း၊ငါဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်းရှာ၍မတွေ့။’’
16 Oct 09, 06:24
သစ္စ၀တီ: ဆရာလေး လာရောက် နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။
16 Oct 09, 06:20
16 Oct 09, 06:19
myint2: သူ့အမှားတွေပေါ်လာတော့ ထင်ရာတွေပြေပြီး ရူးချင်ယောင်ဆောင်တာနေမှာပါ မရူးလောက်သေးပါဘူး။ ရူးပြတဲ့နည်းနဲ့ ခြောက်တဲ့နည်းကို သုံးနေတာ၊ မကြာခင်တော့??????
16 Oct 09, 06:10
သစ္စာတရား: လောက၌ ဒုက္ခတရားသည်ကား မုချရှိ၏ ။ထိုပြဿနာများသည်ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာမဖြစ်သောကြောင့် ငါသည်မဖြေကြားဘဲ သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာဟောသည်
16 Oct 09, 05:54
သစ္စာတရား: စာပေနဲဓမ္မကို ရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်၏ အသိပညာကြွယ်ဝမှု၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု စသည်တို.ကို အကြောင်းပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲသက်သက်ဖြင်.မလေ.လာသင်.ချေ။
16 Oct 09, 05:51
သစ္စာတရား: အချို.ဗုဒ္ဓဝါဒီတို.မှာမူ ဗုဒ္ဓဟောကြားသော တရားများထဲမှ တစ်ခုတည်းသော တရား ဥပမာ အနတ္တတရား၊ သို.မဟုတ် ကမ္မဝါဒကို အစွဲဥပါဒန် ဖြစ်နေတတ်ကြ၏။
16 Oct 09, 05:50
သစ္စာတရား: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို. ခံယူထားသော ဗုဒ္ဓဝါဒသည် မှန်ကန်သည်ဟု စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ပါက သူတစ်ပါး၏ ဝေဖန်စိစစ်မှုကို ခံနိုင်ရပေလိမ်.မည်။
16 Oct 09, 05:48
သစ္စာတရား: လူတွေကို တဏှာလောဘစိုးမိုးနေတဲ. အတွက်လူ.ဘုံကြီးဟာ ဒုက္ခဘုံကြီးဖြစ်နေပုံကြီးဖြစ်နေရပါတယ်ဗျာ
16 Oct 09, 05:46
သစ္စာတရား: အချို.ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမူကား ငါဘုရား၏တရားကို မကြားနာရသော်လည်း အကျွတ်တရား ရကြလိမ်.မည်
သစ္စာတရား: “ငါဘုရား၏ တရားကို ကြားနာရသော်လည်း အချို.ပုဂ္ဂိုလ်တို.သည် အကျွတ်တရား ရကြလိမ်.မည်မဟုတ်။
16 Oct 09, 05:45
16 Oct 09, 05:41
သစ္စာတရား: အချို.စာအုပ်များကို မိမိယုံကြည်ချက်နှင်. ဆန်.ကျင်သည်ဆိုပြီး ပစ်ပယ်မထားသင်.ချေ။
16 Oct 09, 05:40
သစ္စာတရား: သင်တို့သည် ဤအယူသာမှန်၏။ အခြားအယူအားလုံးသည် အချည်းအနှီးတည်းဟု တထစ်ချ မစွဲမှတ်ထားသင့်။ -မဇ္ဈိမနိကယ်၊မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ- စင်္ကီသုတ် ....စသည်
သစ္စာတရား: ‘‘အရှင်ဂေါတမ၊ဒုက္ခကိုမိမိသည် ပြုပါသလော’’ ‘‘အို..ကဿပ၊မိမိသည် ဒုက္ခကိုပြုသည်ဟူ၍ မဆိုသင့်’’ ‘‘ဒုက္ခကို သူတစ်ပါးသည် ပြုပါသလော’’ ‘‘သူ တစ်ပါးသည် ဟူ၍လည်း မဆိုသင့်’’ ‘‘ဒုက္ခကို မိမိသည်လည်းပြုသည် ၊ သူတစ်ပါးသည
16 Oct 09, 05:33
သစ္စာတရား: *ဗုဒ္ဓ၏ ပဓာနရည်ရွယ်ချက်သည် လူသတ္တ၀ါတို့အား ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်လမ်းခရီးကို ညွှန်ပြရန်ဖြစ်၏ ။
16 Oct 09, 05:32
သစ္စာတရား: ‘‘ပညာရှိသည်ချမ်းသာသုခကိုမရှာဘဲ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်မှုကိုသာရှာ၏ ။’’
16 Oct 09, 05:19
သစ္စာတရား: အူလချီးလား အောင်မြင့်ရ နာမည်ဆိုတာအမျုိး၂တပ်လို့ရတယ် ဒီလောက်ချာနေရင်လဲဘလောမှာ မဝင်တာဘဲကောင်းပါတယ် ငါနဲမပြောဘူးဆိုတောလဲ မင်းဘ၀အတွက်အသိနည်း သွားတာပေါကွာ
16 Oct 09, 05:13
သစ္စာတရား: ကာမဘောဂ လူချမ်းသာလည်း ကင်းကွာဝေးစွ သမဏ၏ သုခလည်းရှုံး နှစ်မျိုးရှုံးလျှက် ဂတုန်းသာလျှင် အဖတ်တင်၏
16 Oct 09, 05:00
အောင်မြင့်: သစ္စာတရားဆိုတဲ့လူက ဘလော့မှာ အောက်တန်းကျတဲ့ အရေးအသားတွေ ရေးလာအောင် စီဘောက်ကနေ လာဆွပြီး ဒလန်လုပ်ပေးနေတာ ထင်တယ်ဗျ။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လာနှောက်နေတာ။ ကျွန်တော်လဲ ဒီငနဲကြီးကို ပြန်မပြောတော့ဘူး။ သတိထားကြပါ
16 Oct 09, 04:57
သစ္စာတရား: အေးကွငါကမရူးကြီးဆိုတော မင်းကအရူးလေးပေါကွာ မပူပါနဲမင်လဲနောင်တချိန်မှာ ငါလိုအရူးကြီးဘဝရောက်ရအုန်း မှာပါကြိုဆိုနေတယ်နော်
16 Oct 09, 04:46
အောင်မြင့်: အရူးကြီး။ ဘာတွေ လာ၇ူးနေတာလဲ
16 Oct 09, 04:44
သစ္စာတရား: အမှန်တရား မီးပျက်တဲ့ သစ္စာမဲ့ မြို့ပျက်ညမှာ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လှည့်စားသူများ အကြောက်တရားနဲ့ ကင်းပုန်းဝပ်နေတယ်
16 Oct 09, 04:41
သစ္စာတရား: ဘလောပိုင်ရှင်နဲတကွသူတရားကိုနာ ယူသူအားလုံး(အားပေးနေသူပါဆိုတဲ့) လူအားလုံးမဂ်ဝင်ဖိုလ်ဆိုက်ဖြစ် ကြပါစေလို့ဆုပေးလိုက်တယ် ဘာဆိုဘာမှကိုမလိုချင်နဲ လိုချင်စိတ်ရှိနေလို့ကတော သူများးကိုရေးပြနေလဲ ဘာမှမထူးရေးချမှ
16 Oct 09, 04:33
သစ္စာတရား: ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ.မတော်သေးပါဘူးလေ မတော်တရော်တွေဖြစ်ကုန်အုန်းမယ် ကောင်းနေကြလူအများစုကကောင်း တာမဟုတ်ဘူးလောကမှာလူရိုင်းက ခတ်မျာများဘဲသာဝကတို့ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ့်သာဝကတွေကတော့ မပျက်စေချင်ဘူးဗျာ
16 Oct 09, 04:29
သစ္စာတရား: ဟောလာပြန်ပြီအောင်မြင့်ဆိုက ငါကိုသစ္စာတယုတ်လေးဘာလေးနဲ ငါကတောအကုသိုလ်ကင်းတဲ့နေ့ဆို ပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်သူကငါကို လာဆွပြန်ပြီ
16 Oct 09, 03:27
အောင်မြင့်: ကိုဇော်အောင်ရေ၊ ကျုပ်တော့ သစ္စာတယုတ်ကို ဘာမှ မပြောရဲတော့ဘူး။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျူပ် သာဝက ဖြစ်ကုန်ပြီ
16 Oct 09, 03:26
သစ္စာတရား: ကောင်းလိုက်တာဒီနေ့ဘယ်နဲမှမညင်း လိုက်ရဘူးကောင်းလိုက်တာဗျာ ဒီတိုင်းလေးဘဲနေတိုင်းမြင်ချင်တယ် ငါပြောတိုင်းရှောက်မပြောနဲ မင်းတို့အောက်တမ်းကျသွားမယ် သာဓု.....
15 Oct 09, 21:45
15 Oct 09, 21:16
သစ္စာတရား: စကားလုံးအမှားပါရင်နားလည်ပေးပါ ဖြည့်စွပ်ပေးကြပါ
15 Oct 09, 21:14
သစ္စာတရား: ငါဟာစကားပြောမကြမ်းတမ်းဘူး သေချာကိုမိုက်ရိုင်းပြနေတာ ရိုင်းစိုင်းငါသိတယ်ဘလော့ပိုင်ရှင်ကို အားနာတယ်ဘုန်းကြီးလားလူလားမသိ
15 Oct 09, 21:09
သစ္စာတရား: အာလုံကိုလေးစားတယ် ကိုယ်ရဲယုံကြည်မှုကိုအစင်ထာဝရ ပြန့်ပွါးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင် ကြပါစေ
15 Oct 09, 21:07
သစ္စာတရား: Paccuppannakammavadin Buddhism တိုရဲတရာတော်တွေကိုလဲလေ့လာဖတ် ရှု့နိုင်ပါတယ်
15 Oct 09, 21:03
သစ္စာတရား: ဟောငါဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဆိုလာ ပြောခိုင်းနေပြီ
15 Oct 09, 21:01
သစ္စာတရား: ငါကဆုံးဖျတ်ပြီး၂ဘယ်သူကိုမှဘာမ ပြောချင်ဘူးမင်းတိုငါရဲအမည်နာမကို လာမထည့်နဲအာလုံးကိုလေးစားတယ် ခန္တီတရားနဲပြည်စုံတဲ့ဘလော့ပိုင်ရှင် ကိုချီးကြူးတယ်
15 Oct 09, 20:58
zaw aung: ခင်ဗျားမြေမျိုမယ်
15 Oct 09, 20:52
သစ္စာတရား: ဘုရားတောင်ဆဲခံရသေးတယ် ဆရာတော်ဆိုလူတွေကဘာသားနဲထု ထားလို့လဲမင်းကနာနေရအောင် မင်းအမေနဲဘယ်လိုပတ်မှုရှိလဲ?
15 Oct 09, 17:42
suway: ရေးတော့ သစ္စာတရားတဲ့ ကြည့်စမ်း ဆရာတော်ကြီးတွေကိုများ ကိုရင်ကြီးတွေတဲ့ အတော်စော်ကားတာပဲ။
kog: ဖတ်သွားပါတယ် ကောင်းပါတယ် သာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေကြတာ။ အားပေးပါတယ် ။
15 Oct 09, 06:01
သစ္စာတရား: ကိုယ်အမှားကိုသိတာလဲသစ္စာဆိုက် တာဘဲဗျဒီနေ့ငါကိုယ်တော်မြတ်ချွတ် လိုက်တာဥပသကာနှစ်ကျွတ်တမ်း ဝင်းသွားတဲ့အတွက်ချစ်သားဓမ္မစေတီ မှတ်တမ်းယူရန်ငါကိုယ်တော်မြတ် မိန့်မှာတော်မူသည် ....
15 Oct 09, 05:51
15 Oct 09, 05:50
15 Oct 09, 05:49
15 Oct 09, 05:48
15 Oct 09, 05:03
သစ္စာတရား: တကာတို့ဘုန်ကရူးနေတာ(၅)နှစ်ရှိ တကာတို့ကအလခုမသိတာကို အေးသိရင်ပြီးတာဘဲတကာ တို့လဲကောင်းကောင်းနေကြ လူတွေက ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး ဘုန်း၂ဆေးသောက်လိုက်အုန်းမယ်
15 Oct 09, 03:29
zaw aung: ကိုအောင်မြင့်ရယ် ကျနော်လဲ အရူးနဲ့စကားပြောမိလို့မှားပါတယ်ဆို
15 Oct 09, 03:06
အောင်မြင့်: အရူးနဲ့မှ ဖက်စကားပြောမိတဲ့ ငါ့အမှား
15 Oct 09, 02:36
သစ္စာတရား: ကောင်းလားသစ္စာတရားဆိုတာဒီလိုဘဲ ရယ်ရင်သစ္စာထိုက်တယ် အဲဒီတော့ ငအောင်မြင်ရနဲ့ငဇောအောင် သစ္စာထိုက်တဲ့စာရင်းဝင်သွားပြီ ဘာလိုလိုနဲ ဒီနေ့တရားဟောရတာ သာဝကနှစ် ယောက်တိုးသွားတယ်သာဓု...
15 Oct 09, 02:02
အောင်မြင့်: ဟီးဟီး.. သစ္စာတရားဆိုတဲ့သူ ရေးတာ အရူးရေးတဲ့ စာတွေ ဖတ်နေရသလိုပဲ။
15 Oct 09, 01:50
zaw aung: ကျုပ်ကိုကလဲမှားတာ အရူးကိုလက်ခံစကားပြောသလိုဖြစ်နေတယ်
15 Oct 09, 01:47
zaw aung: ခင်များက ကျားနာတကောင်နဲ့တူတယ် ချက်ကောင်းကို အပစ်ခံထားရပုံရတယ် သဲချည်းမဲချည်းကို လာတိုက်နေတာ ဒီဘလောက်ပိုင်ရှင်ကိုတော့ ချီးကျူးတယ်ဗျာ သာသနာအတွက် အကြိုးရှိပါ့ဗျာ
15 Oct 09, 01:42
သစ္စာတရား: ပြောရရင်တောဒီဘလာလိုပေါ ဟုတ်ဘူးလား ဘူလေးလဲဟေ့ ဘူလေးလဲ
15 Oct 09, 01:40
သစ္စာတရား: လူယုတ်မာဆိုတာသူများအကြောင်းတွေ အကျယ်တဝင့်ရေးနေတာကမှလူ ယုတ်မာလို့ခေါ်သဗျာ
15 Oct 09, 01:38
သစ္စာတရား: သူမျာမကောင်းကြောင်းမပြောကောင်း အကြောင်းကိုစစ်ကိုယ်အပြစ်တဲ မှတ်ထားနော်မေးသမချင်း
15 Oct 09, 01:37
zaw aung: ခင်းဗျားမဟုတ်တာလုပ်နေတာကို လူသိမှာတော်တော်ကျောတ်သလား ခင်ဗျားဒီလောက်ရိုင်စိုင်းနေတာကြည့်ရုံနဲ့ လူယုတ်မာဆိုတာသိသာတယ်
သစ္စာတရား: ဒီဘလောတည်နေသရွှေငါကတော ဟောကြားနေမှာဘဲဒါမှမင်းတို့ကျွတ်တမ်း ဝင်မှာ မင်းတို့ကျွတ်တမ်းဝင်တော့ လောကကြီးလဲ ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ
15 Oct 09, 01:31
သစ္စာတရား: ငါမလာဘူး မင်းတို့လဲသူများအကြောင်းမရေနဲ ဒီဘလောဟာ ဘယ်သူအကြောင်းရေး ထားလဲမင်းတို့ကန်းနေလား
15 Oct 09, 01:29
သစ္စာတရား: အရူးက ကောင်းတဲလူကိုအရူးလို့ပြော နေတာတွေဟာ တရားတော်နဲ ဆီလျှော် ပါတယ်
15 Oct 09, 01:27
သစ္စာတရား: တစ္ဆေကိုလူကပူး ခွေးရူးကဒုတ်ဆောင် နွားရှေ့ကကိုထွန်ကြူး ထူးတဲတဘောင် ဒီတဘောင်လွှတ်အောင်ရှောင်ကြ ကြောင်ညီနောင်ကြွက်ကချောင်းတယ် ပြောင်းပြန်ကာလ
15 Oct 09, 01:26
zaw aung: ခင်ဗျားမလာနဲ့ဒီကို ခင်ဗျားဆိုက်မှာခင်ဗျားဟော
15 Oct 09, 01:25
သစ္စာတရား: ငါတရားတော်တွေအတော်သဘောကျ ပုံရတယ် သူရယ်နေတယ်ဆိုတော့ သာဓု...
15 Oct 09, 01:24
zaw aung: သေချာပါတယ် ခင်ဗျားရူးနေပါပြီ
15 Oct 09, 01:21
သစ္စာတရား: ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားစစ်တရားမှန်ကိုရှာမှီးလိုသူများအတွက် http://www.yatanar.co.cc/
zaw aung: ဟား ဟား ဟား ဟာသတွေ
15 Oct 09, 01:14
သစ္စာတရား: လောကမှာ လူဆိုတာရှိတယ်အဲဒီလူသားဟာ နင်နဲငါဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး နင်ဟာနင်ဖြစ်တယ်ငါဟာငါဖြစ် အဲဒါကိုဘဲခြားနားတစ်ခုလို့နင်တို့မှတ်ထား ဒီနေဒီလောက်နောက်နေ့ဆက်မည်
15 Oct 09, 01:09
သစ္စာတရား: သိပါယ်ဆိုက်ပွါး တရားကိုတနေတစ်လုံး ငါဟောကြားမယ်အားလုံးလိုက်နာကြပါ ဒီဆီဘောက်ကဘဲဟောကြားမှာဖြစ် ပါတယ်သာဓုခေါ်နိုင်အောင်လို့ပါ အတင်းပြောတာတွေရပ်ပြီးဓမ္မတွေဘဲေ
15 Oct 09, 01:08
15 Oct 09, 00:52
သစ္စာတရား: ငါဟာဓမ္မစေတီမဟုတ်သလိုမိုးပြာလဲမဟုတ် မင်းတို့ရဲလုပ်ရက်ကိုမကြိုက်လို့ရေးနေတာကွ မင်းတို့နဲဗုဒ္ဓတရားနဲမတန်ဘူး ရေးသင့်တာကြမရေးဘူး မဟုတ်တာရှောက်ရေးကိုယ့်အထုပ် ကိုယ်ဖြေတယ်မင်းတို့ကကော့ဘယ်လောက် မှန်နေလို့လဲမိ
zaw aung: ခင်ဗျားဘာသာသွားငရဲပြည်ကို
zaw aung: ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမထူးတော့မသိဘူး ခင်ဗျားရူးနေတာတော့သေချာတယ်
သစ္စာတရား: ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်တရား မပျက်ဘို့လိုပါသည်တပါးသူဆုံးမရင် မိမိကိုယ်တိုင်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ် အောင်ကြိုးစားပါင့ါရဲ့ယုံကြည်ချက်ကို ဘယ်သောခါမှပြင်နိုင်မည်မဟုတ် သေသည့်တိုင်အောင်ယူမည် မင်းတိုလဲခေါ်ဆောင်မည်
14 Oct 09, 22:42
သစ္စာတရား: ငါဘယ်လဲဆိုတာကိုအတော်သိချင်ပုံ ရတယ်မင်းတို့အားလုံးကိုချေချွတ်မယ် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့အား လုံးသိစေရမယ်လူ့ဗာလတွေများနေလို့ ဒို့သာသနာမထွန်းကားဖြစ်နေတာ ဘာလဲဘယ်သူလဲဆိုတာသိရမှာပေါ
14 Oct 09, 22:32
သစ္စာတရား: ရဟန်းတစ်ပါးပြစ်မှုကြူးလွန်တယ်ဆိုရင် အဲဒီရဟန်းကိုဝိနည်းဥပဒေတိုင်းသာ စီရင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပါရာဇက(၄)ပါးလုံ့နေသရွှေလူချွတ် ခွင့်မရှိပါ
အောင်မြင့်: လက်မခံပါဘူး။ စိတ်ချပါ။
အောင်မြင့်: တွေရော ဓမ္မစေတီ ကောသလ္လဆိုတဲ့ သာသနာဖျက် ကွန်မြူနစ် ဘုန်းကြီးတုရော ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ ပြေးလမ်းကောင်းအောင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစကားတွေ ပြောပြီး အခွင့်ရှာနေတာပဲ။ ဒီသာသနာဖျက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲ
14 Oct 09, 21:38
အောင်မြင့်: ဒီသစ္စာတရားဆိုတဲ့လူက သူ ဘုန်းကြီးပါလို့ ပြောလိုက်၊ ဓမ္မစေတီဖြစ်မယ် ပြောတော့တစ်ခါ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီပါ ပြောလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုး ဖုံးနေတာပါ။ သာသနာဖျက်တဲ့ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဒီ ပစ္စုပ္ပန် ခွေးဝါဒီ
14 Oct 09, 21:35
အောင်မြင့်: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေက အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစကားတွေ ပြောပြီး ရောင်တော်ပြန် လုပ်လာလို့ ဝင်ဖြေရှင်းပါရစေ။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးသမားတိုင်း ကွန်မြူနစ်နဲ့ ကွန်မြူနစ်နောက်လိုက် ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီဆိုတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မဟုတ်ပါဘူး။
14 Oct 09, 20:55
14 Oct 09, 20:50
14 Oct 09, 20:41
သစ္စာတရား: မဟနဆိုတဲကိုရင်ကြီးတွေကိုလေးစား ရအောင်ဘာအဆင့်တန်းရှိလို့လဲ ဘုရားခေတ်ကရုံးထိုင်တဲရဟန်းဘယ်နှစ်ပါး ရှိလဲပြောစမ်းစစ်အာဏာရှင်ဆန်တဲ အဖွဲ့စည်းမှန်သမျှကိုရှုတ်ချတယ်ကွာ လိုက်နာစရာမလိုဘူးကွခေတ်ကုန်နေပါပြီ
14 Oct 09, 20:32
သစ္စာတရား: ရိုင်းတာကမင်းတို့ကွသူများအကြောင်း လျှောက်ရေးနေကြတယ် အေးပြောရအုန်းမယ်မြန်မာပြည်မကလို့ အဝီစီပါသွားသွားကြိုက်သလောက်သွား ကြိုက်သလောက်ရေးထည့်ကိုမတွက်ဘူး မဟနမကလို့ယမမငိးဘဲဖြစ်နေဖြစ်နေ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးကွ
14 Oct 09, 10:25
ဆြာညွှန့်: သစ္စာတရားဆိုတဲ့လူ အတော်ရိုင်းတာပဲ မဟနကသံဃာတွေကိုစော်ကားနေတာ ကံကြီးထိုက်မယ်နော်
14 Oct 09, 09:39
zaw aung: ကျေးဇူးပြုပြီးဒီဘလောက်ကို လူသိများအောင်လုပ်ပေးကြပါဒါမှ အမှန်တရားကိုလူသိမှာပါ
14 Oct 09, 08:38
ရဲသော်: သစ္စာတရားဆိုတာ ဓမ္မစေတီကိုယ်တိုင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူ နော်ကဆုံး လာရေးတဲ့ စာသားတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်ဆိုတာ ဖုံးဖို့ မေ့သွားပုံ ရတယ်။
14 Oct 09, 08:21
ကိုလေး: သစ္စာတရားအမည်ခံပြီး အတော်ရိုင်းတာပဲကို ရွှေမြန်မာရယ်။
14 Oct 09, 08:11
69: သာသနာကို စောင့်ရှောက်နေသူများကို လေးစားပါတယ်။ မဟနကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးများ တရားအမှန်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါ။
4 Oct 09, 04:10
သစ္စာတရား: လူဆိုတာ အမှန်တရားကိုရှာဖွေတတ်ရတယ်
14 Oct 09, 02:46
14 Oct 09, 02:33
သစ္စာတရား: တကယ်ဆိုကိုယ်တရားကိုရေးပေါ့ အခုတော့ဟိုဘုန်းကြီးကဒီလိုဒီဘုန်းကြီးက ဒီလိုနဲစောက်တင်းပြောတဲ့စာတွေဘဲ တင်ပြနေတယ်ကိုယ်ဘလော့မှာကိုယ့် အကြောင်းကိုတင်တာဘဲကောင်းပါတယ် အေးပေါလေကိုယ်ကဘာမှမဟုတ်လေ တော့သူမျာအကြောင်း
14 Oct 09, 02:26
သစ္စာတရား: မင်းတုိ့လဲပါစပ်ကသာထေရဝါဒလို့ ကြွေးကြော်နေတယ်ပါရာဇိက(၄)ပါးတောင် လုံခြုံတာမဟုတ်တောမင်းတို့ကိုထည့်ကို တည့်ကိုမတွက်ဘူးကွငါတို့ထည့်တွက်တာ စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်သန်းရွှေကွ မင်းတို့မိုးကောင်းတုန်းရွာထားအုန်းပေါ့
14 Oct 09, 02:22
zaw aung: ခင်ဗျားအသုံးအနှုန်းတွေကရိုင်းလှချည်လား တော်ပြီ လူလိုပြောလို့နားလယ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူး
14 Oct 09, 02:19
သစ္စာတရား: ဘာသာတစ်ခုမကဘူးကွ လိုအပ်လာရင်ခေတ်ကတောင်းဆိုလာရင် ဆယ်ခုလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အခုတစ်ရာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်မင်းတို့.မ.ဟ.နကိုရင် ကြီးအုပ်စုကျွတ်တမ်းဝင်အောင်ချေ ချွတ်ပြမယ်ကြည့်နေ
14 Oct 09, 02:14
သစ္စာတရား: မင်းတိုမဟနဦးဆောင်တဲ့ ထေရဝါဒအရေခြုံထားတဲ စောက်သုံးမကျတဲ့ခပ်ချာချာဘုန်းကြီး တွေရှိနေတောဘာသာသစ်ပေါ်တာ မဆန်းပါဘူးကွာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ ကောင်း၂နေကြပါ
14 Oct 09, 02:10
သစ္စာတရား: မှန်တယ်ထင်လို့ဟောနေတယ်ကွ မင်းတို့ကကန့်လန့်၂လုပ်နေတောဒို့ကပြော နေရတယ်
13 Oct 09, 21:13
zaw aung: မှန်တယ်ထင်ရင်လုပ်ပါ အရေးကြီးတာက ထေရဝါဒ အရေမခြုံပါနဲ့ ထေရဝါဒ ခေါင်းစဉ်မတပ်ပြီးလူတွေကိုမညာပါနဲ့
13 Oct 09, 20:13
သစ္စာတရား:်အေးပြောရအုန်းမယ် တန်ု့ကြည်တောင်လိုခပ်ချာချာရဟန်း ထဲမှာဒို့မပါဘူး
13 Oct 09, 20:11
သစ္စာတရား: မင်းတို့က မှားတယ်လို့ထင်ပေမယ် ငါတို့ကမှန်တယ်ကွ မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကျွတ်တမ်းဝင် အောင်ကြိုးစားကွ(၂၀)ရာစုခေတ်လို အာဏာပါဝါတွေလာမပြနဲ ဘယ်ခေတ်ရောက်နေပြီလဲသိလား မင်းတို့လက်ညောင်းရုံကလွှဲပြီးဘာမှ ဖြစ်မလာ
13 Oct 09, 08:23
S: ဓမ္မစေတီလဲ နာမည်ရင်းနဲ့ အစိုးရကို ဖားလိုက်၊ နာမည်အတုနဲ့ အစိုးရကို လာဆဲလိုက် မျိုးစုံ ဥာဏ်များနေပါလား။ အလိမ်ပေါ်မှာ စိုးလို့ မပြန်ရဲတာကြောင့် နအဖ ဆဲပြပြီး အကြောင်းပြချက် ရှာတာပဲ။
13 Oct 09, 00:40
zaw aung: ပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောပြီးမှ မရှင်းနိုင်လို့ လျှောက်ရမ်းမနေနဲ့
13 Oct 09, 00:38
zaw aung: မှားတာကိုမှားတယ်မပြောလို့ မှန်တယ်ပြောရမှာလား မကျေနပ်ရင်ဘာသာအသစ် ထောင်လိုက် လူကြားကောင်းအောင်ထေရဝါဒလို့တော့တံဆိပ်မကပ်နဲ့
12 Oct 09, 21:57
သစ္စာတရား: မဟနတွေနော် နင်တို့သန်းရွှေကိုတောမချွတ်ကြဘူး အရင်ခေတ်လိုအောင့်မေနေကြတယ် ရှင်ဥက္ကဌတို့ခေတ်ကတောရတာပေါ
12 Oct 09, 21:54
12 Oct 09, 21:44
12 Oct 09, 21:43
12 Oct 09, 21:42
12 Oct 09, 21:37
သစ္စာတရား: မဟန တွေနော်မင်းတိုသန်ရွှေကိုတော့တရား
12 Oct 09, 21:16
သစ္စာတရား: သူများမှန်တာ မှားတာမပြော ဘဲ ကိုယ်ကိုတိုင်ကျင့်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ် မဟန ကိုရင်ကြီးတွေနော် သူများကိုဘဲတရားပြနေတယ် နင်တို့ကိုယ်တိုင်တရားရှိအောင်အရင်ကြိုးစာ့း
သစ္စာတရား: ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားစစ်တရားမှန်ကိုရှာမှီးလိုသူများအတွက် http://www.yatanar.co.cc/ The A,B,C Of Buddhism
မှူးကြီး: ရတနာကြီးရယ် သင်းကိုလည်း သနားတယ်။
မှူးကြီး: ဗိုလ်ချုပ်ရေးတာကောင်းတယ် ရီရတယ်။
11 Oct 09, 20:43
သစ္စာတရား: aids ကပြောနေတယ် ထောက်လှန်းရေးနဲဘာနဲ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာထောက်လှန်းရေးဆို တာမရှိစစ်အုပ်စုရဲနောက်လိုက် ကမ္ဘာအေးကကိုရင်ကြီးတွေဘဲ ထောက်လှန်းရေးအလုပ်ကိုငွေပေးခိုင်း နေတာ သင် တို့သိပါတယ် ကိုယ်မျက်ချေးကိုယ်မြင်စေ
11 Oct 09, 18:15
11 Oct 09, 15:38
S: ထောက်လှမ်းရေးတွေ ဟိုဘက်လိုလို ဒီဘက်လိုလိုနဲ့ လာရေးမွှေနေတာ ဘလော့ရှင်တွေ ဖျက်လိုက်ရင် ကောင်းပါမယ်။ ဘင်လာဒင်နာမည်ခံရေးနေတာ ထောက်လှမ်းရေး လေတွေ မှတ်တယ်။ ဓမ္မစေတီကို သူတို့ ကာကွယ်ပေးနေတာပါ။
nyunt: ဦးညွန့်ပုတီးစိတ်နည်း လိုချင်ပါတယ် ဆရာတော်ဦးကောသလဘုရား
10 Oct 09, 09:30
ဗိုလ်ချုပ်: ခွေးသားတွေစားကျက်မလုနဲ စစ်ထဲထည့်ပစ်မယ် ကောင်းကောင်းကျွေးထားကောင်းကောင်းနေ မူစလင်လက်ထဲဖမ်းပြီးအကုန်လုံး အပ်ပြစ်မယ်
10 Oct 09, 09:20
ဓမ္မစေတီ: သူတောင်းစားများဝင်ရန် အိုးအ၀ါရောင်ကျောင်းတုန်းကရန်စ ခုထိမပြေသေးဘဲကိုအငြိူးကြီးသကိုး
10 Oct 09, 09:17
ဘင်လာဒင်: ဘာလဲမင်းက လူတွေကိုလိမ်စားလို့မရမှာစိုးလို့လား မပူပါနဲကွာ မင်းတို့ငါတို့အကြမ်းဖက်သမား တွေကိုထောက်ပံနေတဲခပ်တုံးတုံး လူတွေလဲအများကြီးပါကွ
10 Oct 09, 09:11
ဘင်လာဒင်: ကိုရင်ကြီးဝိဘဇ္ဖရေ ငါကတော့ငါနဲအယူမတူတဲလူတွေကို ခေါင်း ဖြတ်တယ်ကွာ မင်းတို့က ထောင်ထဲပို့ရုံဆိုတော့တယ်နုသကိုး ဘာလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးရေးနေရလဲ ကောသလ္လတို့ဥာဏတိုကို ခေါင်းဖြတ်လိုက်ပါလား
10 Oct 09, 09:10
ဘင်လာဒင်: မောင်ဝိဘဇ္ဖရေ ငါနဲအယူမတူရင်လူတွေကိုခေါင်း ကိုရင်ကြီးဝိဘဇ္ဖရေ ငါကတော့ငါနဲအယူမတူတဲလူတွေကို ခေါင်း ဖြတ်တယ်ကွာ မင်းတို့က
10 Oct 09, 08:54
10 Oct 09, 08:51
ဘင်လာဒင်:်ငါလို့မူစလင်ဘာသာဘဲအကြမ်းဖက်မှူ့ ရှိတယ်မှတ်တာမင်းတို့ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ လဲကမ္ဘာအေးက(မဟန)ကိုရင်ကြီးတွေ လိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလဲရှိသကိုး ဘာပဲဖြစ်၂ wellcomeနော်
10 Oct 09, 08:30
ကိုရင်ကြီးမဟန(ခေတ္တ ကမ္ဘာအေ: ကိုရင်ကြီးဝိဘဇ္ဖရေမင်းဒီစာတွေ ရေးပြီးလူတွေကိုလိမ်စားနေတာ ဘယ်လောက်စုမိပြီလဲ အေးမင်းကိုလဲသတိပေးရအုန်းမယ် မင်းရဟန်းတကာမသမီးဥမ္မာ
10 Oct 09, 08:26
S: အလိမ်တွေ ဟောတာ ပြန်မငြင်းနိုင်တော့ လာဆဲတဲ့အထိ မိုက်ရိုင်းနေပါလား ဓမ္မစေတီ။
10 Oct 09, 08:19
ပေါင်ချိန်: နာမည်က ဝိဘဇ္ဖ စောက်တင်းဘဲထိုင်တုတ်နေတယ် ခွေးတတောင်းစားတွေ
သန်းရွှေ: ဒါလား သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ငါ့အမြင်ကတော့သာသနာပြုတယ်လို့ကိုမထင်ဘူး.အကုန်သေကုန်မယ် . ကမ္ဘာအေးက ကိုရင်ကြီးတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းပစ်မယ်
10 Oct 09, 00:15
S: ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ လိမ်ညာတဲ့သူက ဘာမှန်မှာလဲ။ တကယ် ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်ရင် ဘာလို့ သက်သေမပြနိုင်ရတာလဲ။
10 Oct 09, 00:13
S: ဝိပဿနာ တရားတော်ကို ကဲ့ရဲ့တာ သတိပဋ္ဌာန် တရားကို သရော်တာ သူယုတ်မာအမှုပဲ။ ဒီလို ဟောပြောတဲ့ ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လက ဘယ်လို မှန်နိုင်မှာလဲ
9 Oct 09, 18:52
ukavi: ငါ့ရှင်တို့ ဦးကောကမှန်တယ်နော် သူဆရာကနာမည်ရှိခဲ့လို့ ပြောကြတာ စေတနာနဲ့ပြောတာ
9 Oct 09, 14:36
hla: သာသနာအမှန် အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေ အမှားတွေ မဖုံးပါစေနဲ့
5 Oct 09, 21:52
ဒီ: စီဘောက်လည်း အတော်စုံတာပဲ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...
4 Oct 09, 13:44
S: ဦးကောသလ္လ လိမ်ဟောနေတာ မှန်ပါတယ်လို့ ပြောတာများလား ဦးကဝိ ဆိသူရယ်။
4 Oct 09, 06:52
×××: ဦးက၀ိ ဒီနေရာမှာကြည်ပါ http://dhammaanalysis.multiply.com/calendar/item/10008/10008
3 Oct 09, 13:16
1 Oct 09, 16:41
manaw: သေသေချာချာဖတ်ကြည့်တော့မှသိရတော့ အရင်ကနားထောင်နေတာ ဘယ်သိလိမ့်မလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာတော်ဦးကောဘုရား
0 Sep 09, 17:46
--------------: ပေါ်နေပါလျက် မမြင်လို့ လုပ်မိတာပါ ပြောလို့ မရသလို တမင်လုပ်ခြင်း ဖြစ်နေရင် အပြစ်ရှိပါတယ်။ မမြင်လို့ တက်နင်းမိရင် အပြစ်မရှိပေမယ့် မြင်ရက်သားနဲ့ တက်နင်းရင် တမင် ထိခိုက်စေလိုတဲ့ စေတနာ ပါမှန်း သိသာနေလို့ပါ။
30 Sep 09, 17:43
--------------: ဘုရားရဟန္တာတွေကို မစော်ကားခဲ့ဘူးလို့ ဝမ်းမြောက်ရုံ ရှိပါတယ်။ ဒီတရားတုတွေကို မဆင်ခြင်ဘဲ မှားယွင်းယုံကြည်ပြီး ဆက်ဖြန့်ပေးနေသူတွေ၊ ဘုရားတရားကို ပြင်နိုင်ဖျက်နိုင်အောင် ဆက်အားပေးနေသူတွေကတော့ အလင်းရောင်
30 Sep 09, 17:40
--------------: ပန်ရှိခိုးခြင်း၊ သံဃာများအား လှူဒါန်းခြင်း စသည်များနဲ့ ဖြေဖျောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက တကယ်လို့ ပြောခဲ့မိတာ ရှိမှ ကိုယ့်ကုသိုလ်ရေးတွေ မပိတ်ဆို့ရလေအောင် ပြန်တောင်းပန်ဖို့ လိုတာပါ။ မပြောခဲ့ရင်တော့ ငါ ဝစီကံနဲ့
--------------: ဘာဖြစ်တယ် စသဖြင့် သရော်မိရင် ၇ဟန္တာကို စော်ကားမှုနဲ့ မိမိ ရစရာရှိတဲ့ မဂ်ဖိုလ်တွေ မရ မဖြစ်ရလေအောင် ဘုရားရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှာ ရှိခိုးကန်တောု့ခြင်း၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အမှူးရှိသော ရဟန္တာအရှင်မြတ်များအား တောင်း
30 Sep 09, 17:34
--------------: အမှန်တရား မြတ်နိုးစိတ်ကို မဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မဂ်ဖိုလ်တရားတွေ ရစရာရှိတာ ရခဲ့တာပါ။ အခုလဲ ဘလော့ရှင် လူငယ်များဟာ ဒီတရားတွေကို နားယောင်ပြီး ရဟန္တာလဲ ဒုစရိုက် ရှိတာပဲ၊ လောဘဒေါသ ရှိတာပဲ၊ ခန္ဒာပါးပါးဟာ
--------------: မင်္တေ့ခင် နိဂဏ္ဍ တက္ကဒွန်းတွေကို ဆရာတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားမှန်ကို သိချိန်မှာ သောတာပန်ဖြစ်၊ နောက် ရဟန္တာကြီးပါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ မသိလို့ အလုပ်ကျွေးမှားခဲ့တာက ရိုးရိုးသားသား မှားတာဖြစ်ပြီး စစ်သူကြီးရဲ့
30 Sep 09, 17:29
--------------: မိမိအမှုကို မိမိ တာဝန်ယူပြီး နစ်နာသူများကို အချိန်မီ လိုက်လံ ကယ်တင်လိုကြောင်း၊ မသိသူများလဲ သိစေလိုကြောင်း စေတနာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ကုသိုလ်ထုထည်သာ မြင့်မားမို့မောက်နေပါတယ်။ သီဟ စစ်သူကြီးလဲ မြတ်စွာဘုရားနဲ့
30 Sep 09, 17:26
--------------: ရှားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို စော်ကားလိုတဲ့ စေတနာ မပါ၊ တရားကို ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ စေတနာမပါခြင်း၊ အကြောင်းသိသွားချိန်မှာလဲ အဆိပ်ဖြေဆေးနဲ့ တူတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ချက်ချင်း ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများက
30 Sep 09, 17:24
--------------: မြတ်တဲ့ ကုသိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ မူလ ဖြန့်ပေးစဉ်က ဒါ ဘုရားမဟောတဲ့ တရားလိမ်တွေဆိုတာ မသိခြင်း၊ ဖြန့်နေစဉ်မှာလဲ နာရသူတွေ ပျက်စီးကြပါစေ၊ ဒုက္ခရောက်ကြပါစေ၊ ဘုရားတရားတော်လဲ ပျက်ပါစေ -ဆိုတဲ့ စေတနာ မပါခြင်းများ ထင်
30 Sep 09, 17:22
--------------: ပြောမိသူ မုသားမသင့်ပါ။ ဘလော့ရှင် လူငယ်များ ဓမ္မစေတီ တရားတုတွေကို ဖြန့်ပေးမိတာက ဆေးအစစ်မှတ်ပြီး အဆိပ်ကို ဖြန့်မိတာနဲ့ သဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပြီးတာနဲ့ အဆိပ်ဖြေဆေးတွေ ချက်ချင်း ဖြန့်တာဟာ ကြီးမားမွန်
--------------: တက်နင်းတာ ကြွက်သေသွားရင် ပါဏာတိ မမြောက်ပါ။ သေစေလိုတဲ့ စေတနာ မပါလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ဘ ဆုံးပြီလို့ သူ့အိမ်ကို ပြောလိုက်လို့ လိမ်ညာ စေခိုင်းတာကို တကယ်မှတ်ပြီး မောင်ဘ ဆုံးပြီ လို့ သွားပြောမိရင် မသိလို့
30 Sep 09, 17:15
--------------: ကိုယ်တိုင် တရားတော်နဲ့ ချိန်ထိုး သုံးသပ်မိတာကို အရင် ပြောပါရစေ။ တရားတော်မှာ မကောင်းမှု တစ်ခု ကျူးလွန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ စေတနာက ရှေ့ဆောင်ပါတယ်။ စေတနာသည်သာ ကံ-လို့ ဒါကြောင့် ပြောတာပါ။ ကြွက်ငယ်ကို မမြင်မိလို့
30 Sep 09, 17:13
--------------: အောက်နားမှာ ဘလော့ရှင်များ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့အတွက် ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။
30 Sep 09, 16:59
--------------: ဒေါသ ရှိတယ်၊ မနောဒုစရိုက် ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲတာ လိမ်ညာတာပါ။ သူခိုးတစ်ယောက်ဟာ လူတိုင်း သူခိုးတွေပါလို့ စွပ်စွဲသလို ဖြစ်နေပြီ။
30 Sep 09, 16:58
--------------: ရဟန္တာဆိုတာ မနောဒုစရိုက် ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဓမ္မစေတီ လီဆည် စွပ်စွဲတာ အလွန် မှားယွင်းပါတယ်။ အရှင်မဟာပဿပလဲ ၇ဟန္တာမို့ ဒေါသ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဓမ္မစေတီဟာ သူနဲ့ ရဟန္တာတွေကို တန်းညှိချင်ဇောနဲ့ ရဟန္တာတွေလဲ လောဘ
29 Sep 09, 13:18
ငြိမ်း: လာဖတ်သွားပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု။
28 Sep 09, 08:24
ကျော်ကို: သတိတော့ ထားပါ။ ဘလော့ လာဖျက်သွားဦးမယ်။ ဒါတွေ တင်ပေးနေတဲ့ ဘလော့တစ်ခု ဝင်မရတော့ဘူး
27 Sep 09, 19:27
zaw: တယောက်ကတည်မြဲဆိုတော့လဲကျန်တဲ့လူကမတည်မြဲပေါ့ သူ့တရားပွဲတွေမှာ ထေရဝါဒတရားပွဲလို့ နာမည်ပေးထဲက ကျန်တဲ့တရားပွဲတွေကပဲထေရဝါဒမဟုတ်သလိုလို ဘာ လိုလို
zaw: သန့်ရှင်းဆိုမှတော့ကျန်တဲ့တဖက်ကိုအလိုလိုမသန့်ရှင်းလို့ပြောပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ကွ တယောက်ကတည်မြဲဆိုတော့လဲကျန်တဲ့လူကမတည်မြဲပေါ့ သူ့တရားပွဲတွေမှာ ထေရဝါဒတရားပွဲလို့ နာမည်ပေးထဲက ကျန်တဲ့တရားပွဲတွေကပဲထေရဝါဒမဟုတ်သ
zaw: ဟိုတုန်းကကျောင်းမှာ သမိုင်းသင်တော့ ဆရာ့ကိုမေးဖူးတယ် ဖဆပလကွဲတုန်းက ဘာလို့တဖက်ကသန့်ရှင်း တဖက်ကတည်မြဲ လို့ပေး တာတုန်းလို့ဆိုတော့ ဆရာကရီပြီးတော့ မင်းကလဲကွာ ရှင်းနေတာကို တဖက်က သန့်ရှင်းဆိုမှတော့ကျန်တဲ့တဖက်
27 Sep 09, 19:09
zaw: ဘုရားတရားတော်တွေကို မပြောက်ပျက်အောင်ထိန်းသိမ်းတာကိုမှ ထေရဝါဒခေါ်တယ်ထင်ပါတယ် လူသာမန်တွေလုပ်တဲ့ဗေဒင် နတ်တွေကိုပုတ်ခတ်တာကိုထေရဝါဒလို့မခေါ်ပါးဘူး
27 Sep 09, 19:04
zaw: သာသနာအတွက်ရင်လေးစရာ ပါပဲ
27 Sep 09, 19:02
27 Sep 09, 02:50
ကျော်ကို: ပေးကြလို့ပဲ။ ဘုရားရှင်ကို ကာကွယ်ပေးနေကြတာ အားရစရာကြီး။
27 Sep 09, 02:48
ကျော်ကို: သာဓုခေါ်တယ်ဗျာ။ ဒီလို ထုတ်ဖော်ပေးသူတွေ ရှိတာ သာသနာကြီး အလွန်ကံကောင်းပါတယ်။ ဓမ္မစေတီ တရားကိုဖျက်တာ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ တော်တော် အောင်မြင်နေပြီ။ ဒီအရှင်တွေ သာသနာစောင့် ဒကာလေးတွေ အမြန်ထုတ်ဖော် ဖြန့်ဝေ
26 Sep 09, 18:57
Wayla: >>> ko ko ဆရာတော်တွေကစောင့်နေတယ် တရားဝင်ရှင်းတော့လေ လုပ်လည်းလုပ်ရက်တယ် ဘုရားကျွေးတဲဆွမ်းကို ဘုဉ်းပြီးတော့။
26 Sep 09, 18:54
Wayla: >>> ko ko ခုမှ ဟိုပြောဒီပြော လုပ်မနေနဲ့လေ သာသနာကို ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ခဲ့ပြီတော့ ပဲကောင်းထွက်မလား အောက်မေ့တာ တူတူပါပဲလား
Nanda: အကောက်ဥာဏ်သုံးတာ သိသာနေတယ်။
26 Sep 09, 08:33
Nanda: ဦးကောသလ္လ မကောင်းတဲ့ဥာဏ်တော့ သုံးနေပြီ။ မြတ်စွာဘုရား အလိုတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အဓမ္မဒါဒတွေ ဟောနေတာကို ပြောလာတော့ နိုင်ငံရေး ဆူပူအောင် လုပ်တယ်လို့ မဆီမဆိုင် လာစွပ်စွဲသွားပါလား။ အရေးမယူနိုင်အောင် ဒီလို
25 Sep 09, 22:48
pwkyaw > koko: ၁၊၂၊၈၄ မှာ ကြေညာချက်ထွက်တယ်ဆိုတာကို လိမ်တာမဟုတ်ရင် တိကျစွာဖော်ပြပါ
pwkyaw > koko: ဟောဒါဟာ ၂၀၊၂၊၈၃ က ကြေညာချက်ပါhttp://yellow1color.blogspot.com/2009/09/blog-post_14.html
25 Sep 09, 22:42
pwkyaw > koko: ကြေးမုံသတင်းစာကို ကိုင်ပြောရင် အဲဒါကိုချေပတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေ ထွက်လာပါမယ်
25 Sep 09, 22:40
pwkyaw > koko: ကြေးမုံပါစာသားအတိုင်း အတိအကျပြဆိုဖို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်
Nanda: ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံမဆောင်နိုင်တာ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ ဆောင်နိုင်တယ်လို့ သူ လိမ်ရင်တော့ ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
Nanda: ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လက အသက် ၄၀ နဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ မာနကျော့ကွင်းက မလွတ်သေးဘူး--လို့ ဟောတာ အခန်း ၁၃- မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်တုန်းက ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်သွားတာလဲ။ သိတောင် မသိလိုက်ပါလား။
HlaWin: သူကနိုးထေရဝါဒ။ သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ကြ
25 Sep 09, 14:19
HlaWin: ခုမှ ကြေးမှုံရုံလား သံဃာကိုပဲရုံတယ်
25 Sep 09, 14:18
HlaWin: ဒါသံဃာခွဲနေတာမဟုတ်ဖူး တရားဖူးနေတာ
25 Sep 09, 14:17
HlaWin: အလကား ဉာဏနဲ့ဥက္ကဋ္ဌ တပည့်တွေ ငွေနဲ့ပေါက်လိုပဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် သာသနာကိုငွေနဲ့ ပေါက်လို့မရဘူး။
23 Sep 09, 21:42
koko: နိုင်ငံတော်က ၂၀-၂-၈၄ထုတ်ကြေးမှုံသတင်းစာပါဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုန်းမှူ့ခင်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ နေ့စွဲပါ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၈၄နှင့်ဦးမြင့်သိန်းကိုအဓမ္မဝါဒမှရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်
23 Sep 09, 21:41
koko: နိုင်ငံတော်က ၂၀-၂-၈၄ထုတ်ကြေးမှုံသတင်းစာပါဝိနဓမ္မကံအဓိကရုန်းမှူ့ခင်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ နေ့စွဲပါ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၈၄နှင့်ဦးမြင့်သိန်းကိုအဓမ္မဝါဒမှရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်
23 Sep 09, 21:39
koko: နိုင်ငံတော်က ၂၀-၂-၁၉ထုတ်ကြေးမှုံသတင်းစာပါဝိနဓမ္မကံအဓိကရုန်းမှူ့ခင်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ နေ့စွဲပါ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၈၄နှင့်ဦးမြင့်သိန်းကိုအဓမ္မဝါဒမှရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်
23 Sep 09, 21:21
23 Sep 09, 21:16
koko: ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ဦး ဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ ဘာမှမဆိုင်
koko: ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ဦး ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဘာမှမဆိုင်
23 Sep 09, 20:56
koko: အပယ်ကျမယ် နော် သူများမကေ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ
23 Sep 09, 20:54
koko: အပယ်ကျမယ် နော် သူများမကောင်းကြောင်းတွေ
လရောင်: အမှန်တရား မြန်မြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေဗျာ၊ သာသနာကို စောက်ရှောက်ကြတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
17 Sep 09, 07:24
zawaung: ဝေဖန်တဲ့သူကစာပေအကိုးအကားနဲ့ဝေဖန်ရင် တဖက်သူကလဲစာပေအကိုးအကားနဲ့ပြန်ချေပနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ
12 Sep 09, 12:31
Nyein Chan: ရပ်ကွက်ထဲ ပြောလိုက်ရတာ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်နဲ့ ခုတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဆိုတာ ဖတ်ပြီး ရယ်သွားတယ်။ ရေးလဲ ရေးတတ်ပါပေတယ်။ haha
10 Sep 09, 18:44
9 Sep 09, 09:50
အောင်: သာဓုဗျာ။ မြတ်စွာဘုရားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာ လေးစားမိပါတယ်။
8 Sep 09, 21:24
wayla: မူလ ဓမ္မစေတီ ဆရာတော်ကို ခုမှသိတယ် ဒီပဲယင်း ကျောက်စာတိုင် ဆရာတော်ကြီးကိုး။
8 Sep 09, 11:27
lknt: သာသနာကို စောင့်ရှောက်နေကြတာ သာဓုခေါ်ပါတယ်...
6 Sep 09, 20:51
အေး၂: အကိုတို့အမတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
6 Sep 09, 20:50
အေး၂: ခုမှသေချာဖတ်မိပါတယ် ထင်တောင်မထင်ဘူး ကျနော်တို့ဒီအမှားတွေ ဘယ်လိုသိကြမှာလည် အပြောကောင်းတော့ ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့
5 Sep 09, 15:47
Powa: ဆက်လေ့လာမယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အမှန်တရားတွေပေါ်ပါစေ။
5 Sep 09, 01:59
4 Sep 09, 22:23
4 Sep 09, 21:50
ဥပသကာ: သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက် ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာ ၀န် အပြည့်ရှိတယ်
4 Sep 09, 14:11
ukowin: အွန်လိုင်းမှာ အတော်လေးတော့ ပြန့်နေပြီပဲ။ သာသနာကိုစောက့်ရှေက်ြနိုင်ကြပါစေ။
4 Sep 09, 12:52
နန်းထိုက်လှိုင်: ထေရ၀ါဒ သာသနာတော်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေပါသည်။
4 Sep 09, 12:21
Labels: C Box
တရားခွေတိုင်းမှာ ပါတတ်သည့် မတရားများ
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးရှိရာမှာ မြန်မာနိုိုင်ငံရှိ ရိပ်သာတွေသည် ကာယာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကိုို စပြီးပြတယ်။ အဲဒဲဒါ ဟောစဉ်လ်လား- ကျင့့််စဉ်လား။ မကွဲပဲပါ။ မခွဲပဲပါ။ ကာယာနုပဿနာဆိုိုတာ တတိယအဆင့့််မို့ အနာဂါမ်ကျမှ လုပ်မယ်။ သတိပိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ကာယ၊ ဝေဒနာ၊ စိတ္တ၊ ဓမ္မလို့ အစဉ်အတိုင်းပဲ သင်ပါတယ်။
No No။ တရားမရပါဘူး။ လုံးဝ မှားပါတယ်။
Posted by Mya&Mg2comments
သံဃအဖွဲ့အစည်းအခြေခံစည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် စာမျက်နှာ(၂ဝ) အခန်း(၁) အပိုဒ်(၂) အပိုဒ်ခွဲ(က)၌ သာသနာဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမတော်ကို ဆိုသည်ဟုလည်းကောင်း၊ အပိုဒ်ခွဲ(င)၌ ထေရဝါဒဆိုသည်မှာ ပထမသင်္ဂါယနာမှ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာအထိ သင်္ဂါယနာခြောက်တန် တင်ထားသော ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဋီကာ အစရှိသော ပိဋတတ်ကို ဆိုသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ယင်းအခြေခံစည်းမျဉ်း အခန်း(၂ဝ) အပိုဒ်(၁၂) အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၌ ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကို တိုးတက်စည်ပင်ပြန့်ပွါးစေရန်နှင့် ပိဋကတ်တော်နှင့်မညီသော ရေးသားခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းများကို တားဆီးကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ အပိုဒ်(၁၃)၌ သံဃအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၏ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဖေါ်ပြပါ အခြေခံမူများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်ဟုလည်းကောင်း ပြဆိုထားပါသည်။
ဤပြဆိုချက်များကို ပေါင်းရုံးသုံးသပ်ပါက မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာတော်ဖြစ်သော ပထမသင်္ဂါယနာမှ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာအထိ သင်္ဂါယနာခြောက်တန် တင်ထားသော ထေရဝါဒပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဋီကာ အစရှိသော ပိဋကတ်တော်နှင့် မညီသော ရေးသားခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းများကို အရေးယူ တားဆီးကာကွယ် နိုင်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရရှိပါသည်ဘုရား။ သို့ဖြစ်၍ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့် မညီသော ရေးသားခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း များကို အရေးယူ တားဆီးကာကွယ်ရန် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ကို သိတော်မူကြစေရန် လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။
ဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့ဘုရား သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံစည်းမျဉ်း အခန်း(၂) အပိုဒ်(၄)၌ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ဤစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံပါဝင်သော သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းသာ ရှိရမည်ဟုလည်းကောင်း၊ အပိုဒ်(၅)၌ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးရှိ ထေရဝါဒသံဃာ့ဂိုဏ်းအသီးသီးမှ ရဟန်းသံဃာဟူသမျှသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ အလိုအလျှောက် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါလျက် ယခုအခါ အချို့ရဟန်းသာမဏေများသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှုကို မခံယူသည့် တရားမဝင်သော သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း လျက် ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်ဘုရား။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းသည် အဆိုပါ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခေခြခံ စည်းမျဉ်း အပိုဒ်(၄) အပိုဒ်(၅)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျူးလွန်ကြသည့်အပြင်- နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားလွှာအမှတ်(၈၁)ကို လည်း ဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာ ရောက်ပါသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက ထုတ်ပြန်သော အမိန့်အမှတ်(၆/၉ဝ)နှင့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာဥပဒေ ဥပဒေအမှတ်(၂ဝ/၉ဝ)တို့ကိုလည်း ကျူးလွန်ရာရောက်ပါသည်ဘုရား။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ရဟန်းသာမဏေတိုင်း သိနေကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ရဟန်းသာမဏေများ သိနားလည်အောင် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဝင် ဆရာတော်များ၊ ကျောင်းထိုင်-ကျောင်းပိုင်ဆရာတော်များ၊ ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်များ၊ စာချဆရာတော်များက
အခွင့်အခါသင့်တိုင်း ဟောပြောဆုံးမတော်မူကြရန် တပည့်တော်တို့ မဟာနာယကအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည် ဘုရား။
နိုင်ငံတော်သံဃနာယကဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့ဘုရား - မြတ်စွာဘုရားသည် သုက္ကပက္ခ၌လည်း ''ယေ တေ ဘိက္ခဝေ အဓမ္မံ အဓမ္မောတိ ဒီပေန္တိ၊ တေ ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခူ ဗဟုဇနဟိတာယ ပဋိပန္နာ ဗဟုဇနသုခါယ ဗဟုနော ဇနဿ အတ္ထာယ ဟိတာယ သုခါယ ဒေဝမနုဿာနံ။ ဗဟုဉ္စ တေ ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခူ ပုညံ ပသဝန္တိ။ တေ စိမံ သဒ္ဓမ္မံ ဌပေန္တီ''တိ။ ပ ။ ရဟန်းတို့ အကြင်ရဟန်းတို့သည် တရားစစ်တရားမှန်မဟုတ်သော အဓမ္မကို တရားစစ် တရားမှန်မဟုတ်သော အဓမ္မဟုလည်းကောင်း၊ တရားစစ်တရားမှန်ဖြစ်သော ဓမ္မကို တရားစစ်တရားမှန်ဖြစ်သော ဓမ္မဟုလည်းကောင်း၊ ဝိနည်းစစ်ဝိနည်းမှန် မဟုတ်သော အဝိနယကို ဝိနည်းစစ်ဝိနည်းမှန်မဟုတ်သော အဝိနယ ဟုလည်းကောင်း၊ ဝိနည်းစစ်ဝိနည်းမှန်ဖြစ်သော ဝိနယကို ဝိနည်းစစ်ဝိနည်းမှန်ဖြစ်သော ဝိနယဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား မဟောအပ် မပြောအပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား မဟောအပ်မပြောအပ်ဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရားဟောအပ် ပြောအပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ်ပြောအပ်ဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား အလေ့အကျင့် မပြုအပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား အလေ့အကျင့် မပြုအပ်ဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား အလေ့အကျင့် ပြုအပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား အလေ့အကျင့် ပြုအပ်၏ဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား မပညတ်အပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား မပညတ်အပ်ဟုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား ပညတ်အပ်သည်ကို မြတ်စွာဘုရား ပညတ်အပ်၏ ဟုလည်းကောင်း ပြကြကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ထိုရဟန်းတို့သည် လူအများစီးပွါးချမ်းသာဖြစ်ခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ခြင်းငှါ နတ်လူတို့၏အစီးအပွါးဖြစ်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းငှါ ကျင့်သည် မည်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ထိုရဟန်းတို့သည် များစွာသော ကုသိုလ်တရားကိုလည်း ဖြစ်ပွါးစေသည် မည်ကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် ဤသာသနာတော်ကိုလည်း တည်တံ့စေသည် မည်ကုန်၏ဟု ဟောတော်မူခဲ့ပါသည်ဘုရား။
(အံ၊ ၁၊ ၁၉။)
သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့နှင့်တကွ သဃာ့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၌ ပါဝင်သော အရှင်မြတ်များသည် လည်းကောင်း၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၌မပါဝင်သော အရှင်မြတ်တို့သည် လည်းကောင်း မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝကဖြစ်သော ရဟန်းသာမဏေအားလုံးတို့သည် လူအများ၏ စီးပွါးချမ်းသာဖြစ်ခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ခြင်းငှါ နတ်လူတို့၏အစီးအပွါးဖြစ်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းငှါ ကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ များစွာသော ကုသိုလ်တရားကိုလည်း ဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်၊ ဤသာသနာတော်ကိုလည်း တည်တံ့စေသောပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်တော်မူကြပါဟု တိုက်တွန်းလျက် ဘုရားတပည့်တော်၏ သာရဏီယသြဝါဒကထာကို နိဂုံးချုပ်ပါသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် အရှင်မြတ်တို့ဘုရား။
(၂၃၊ ၁၁၊ ဝ၈-ရက်စွဲထုတ် သတင်းစာ။)